တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: စော်ကားသူကို အပြစ်မယူ
Posted by မေဓာဝီ at 4:42 AM
အဲဒီ့စကားတစ်ခွန်းက ကျွန်တော့်ရဲ နှလုံးသားထဲကို သံမဏိစိတ်ဓာတ်တွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်.
တရားစကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ အတိုက်ဓာတ်တွေက ရှိနေတာပဲ. အဲဒါကို ခံယူတတ်တဲ့ အခံဓာတ်ပေါ် မူတည်ပြီး ရလာဒ်တွေက ပြောင်းလဲသွားတတ်တာပေါ့ဗျာ. အခုကိစ္စမှာလည်း မမေရဲ့ ဖေဖေက အခံဓာတ်ကို တည့်မတ်အောင်ထားတယ်. ဒါကြောင့် အတိုက်ဓာတ်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကို သူမခံစားရဘူး. သူ့ရဲ့ အိနြေ္ဒမယိုယွင်းသွားဘူး. အဲဒါဗိုလ်ငါးပါးထဲက သမာဓိဗိုလ်ပဲပေါ့ဗျာ.
ဒီပို့စ်လေးကနေတစ်ဆင့် မမေဖေဖေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြီးမားခိုင်ခံ့ပုံကို သိမြင်လိုက်ရပါတယ်. တရားရှာကိုယ်မှာတွေ့ဆိုသလိုပဲ မမေရဲ့ဖေဖေက ဒါကို တရားသဘောနဲ့ ရှုမြင်ပြီး ယောနိသောမနသိကာရကို မွေးမြူလိုက်တာ ချီးကျူးပါတယ် ခင်ဗျာ….
ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် မမေ….
8/06/2007 4:20 AM
နှစ်သက်မြတ်နိုးလေးစားဘို့ကောင်းလှတဲ့ Post လေးပါဘဲ။
8/06/2007 10:55 AM
Your father is suchagreat person.You are very lucky that he is your father because you can learn from him. We can get all the physical goal easily but it is very difficult to train yourself to be strong in mental.Thank you very much for this post.
8/08/2007 5:44 AM
မမ အရမ်းကောင်းတယ်... အရင်က မြလွှာရောက်ဘူးပါတယ်... လိပ်စာက မေ့သွားလို့...
8/11/2007 12:26 PM
HI Mawdar wii
Anything to say for tomorrow?
မမေ ဒီပို့စ်ကို ဒီနေ့မှ ဖတ်ရတယ်
ညလေးလဲ အဆဲခံရတိုင်း သည်းခံနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတယ် သည်းလဲခံခဲ့ပါတယ်။ အရမ်းကြီး တရားလွန်လာတာတောင်မှ လေပြေနဲ့ ပဲ ပြန်ပြောဖြစ်တယ်။ အရမ်းလွန်လာတော့ ဒေါသထွက်ပြီး တစ်ခါတစ်ခါ ပြန်ပြောမိတယ်။ ဒေါသထွက်နေပြီလို့ သိလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ဒေါသကို သတိနဲ့ ပြန်ထိန်းဖြစ်တယ်။ ပြန်ဆင်ခြင်တယ် ငါဘာလို့ ဒေါသထွက်ရတာလဲ သူအထင်လွဲတာ ငါ့မှာ ဘာများ ထိခိုက်သွားလို့လဲပေါ့။ ငါအသက်ရှင်နေသရွေ့ လုပ်နေသမျှ အရာအားလုံးဟာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲ မဟုတ်လား ကျန်တာတွေ ဘာလုပ်ဖို့လဲပေါ့။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့တွေကျတော့ သည်းခံလေ ရောင့်တက်လေ ဖြစ်နေကြတယ်။ ကိုယ်သည်းခံတိုင်း သူဆဲဖို့ချည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေသလားလို့ မမေရဲ့ ဖေဖေကို မေးပေးပါ။ ညလး လူလာဖြစ်ရတာ သည်းခံဖို့ လောကကြီးက ငါ့ကို သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိမရှိ စမ်းသပ်နေသလိုပဲ။
မမေ ဖေဖေပြောသလိုပဲ ညလေးကို ဆဲဆဲလာရင် ဆဲသူကို ပြန်သနားနေရတယ်။ သူမှာ အကုသိုလ်တွေ တအားများနေတာကိုး ကိုယ်က သည်းခံလေ သူ့မှာ အကုသိုလ်တွေများလေ မဟုတ်လား ဒီလိုဆိုတော့ ကိုယ်သည်းခံတာ သူ့ကို အပ္ပါယ်ရောက်အောင် တွန်းပို့နေသလို ဖြစ်နေသလား ????
8/31/2007 4:06 AM